Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Heer Sare ah ooy Iskugu Yimaadeen Masuuliinta Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka
Kulan Heer Sare ah ooy Iskugu Yimaadeen Masuuliinta Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka
Posted by ONA Admin	/ March 24, 2014
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 23/4/2014, kulan heer sare ah oogu qabsoomay iyadoo la,adeegsanayo qalabka isgaadhsiinta casriga ah ( Tell Conferense) Masuuliinta oogu saraysa Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka (HAAU).
Shirkan oo socday mudo dhawr saac ah ayaa waxaa kuwada kulmay Masuuliinta Waaxaha Hogaanka, Iskuduweyaasha Qaaradaha ee HAAU iyo Madaxa Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya (OYSU). Shirkan oo uu shir gudoon ka,ahaa Kuxigeenka Hogaanka HAAU Mudane Xasan Macalin ayaa waxaa kale oo lagu martiqaaday oo kaalin wanaagsan kaqaatay isagoo warbixino meelo badan taabanaysa soobandhigay Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO), Admiral Maxamad Cumar. Wuxuu gudoomiyuhu siqoto dheer leh ooga warbixiyay xaalada guud ee halganka dal iyo dibadba isagoo siiyay masuuliintii kulankan kaqayb qaadatay warbixino aad utayo wanaagsan.
Kulankan oo kamid ah kulamadii joogtada ahaa ee Madaxda HAAU ay iskugu imaan jireen ayaa lagu falanqeeyay aadna loogu lafo guray qodob asaasi ah kuwaasoo kusaabsan Qorshe Sanadeedka (Action Plan) Hogaanka sida waxqabadka iyo horumarinta arimaha halganka. Abaabulka iyo Hirgalinta shirwaynaha Hooyooyinka (Haweenka) Somalida Ogadenya oo laqorshaynayo in laqabto haduu eebuhu yiraahdo bisha May ee fooda nagu soohaysa, Sidii dawladaha aan lanoolahay loogaadhsiin lahaa loogana dhaadhicin lahaa dhibaatada iyo gumaysiga arxanka daran ee bulshada Somalida Ogadenya ay kujiraan, iyo kasbashada taageeroyaasha Halganka Ogadenya ee kukala nool dunida dacaladeeda kuwaasoo uhaya xoraynta iyo aayakatashiga shacabka Somalida Ogadenya taageero balaadhan oon lasoo koobi karin.
Kulankan ayaa kusoo beegmay xilli ay wadaan Hogaanka oogu sareeya ee JWXO abaabul balaadhan oo kusaabsan balaadhinta iyo hirgalinta hawlaha halganka ee kasocda shanta qaaradood ee aduunka. Waxaan shaki kujirin in maanta uusan calanka Ogadenya qorraxdu kadhicin sababtoo ah waxay kahawlgalaan jaaliyaadka Somalida Ogadenya dhamaan qaaradaha aduunka oo idil taasoo usahlaysa madaxda iyo hawlwadeenka JWXO ineey sihufan ugaadhsiiyaan qadiyada Ogadenya Maxfalada iyo Munaasabadaha caalamiga ah sida labadii mudaaharaad ee bishan aan kujirro ay jaaliyaadka qaarada Yurub iyo Koonfur Africa ku kala qabteen Xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva iyo Xarunta Baarlamaanka Africa ee Johansberg.
Kulamada iyo shirarka noocan oo kale ee ayy iskugu yimaadaan madaxda HAAU ayaa lafdhabar u ah dardar galinta iyo hirgalinta hawle halgameedka uyaala Hogaanka HAAU kaasoo siwanaagsan ooga socda dhamaan xarumaha ay kahawlgalaan Jaaliyaadka Somalida Ogadenya.